Nepal Deep | लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने यी ५ उपाय
लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने यी ५ उपाय
गर्मी मौसम शुरू भएसँगै तराई र पहाडी जिल्लामा लामखुट्टेको प्रकोप पनि बढ्न थालेको छ । लामखुट्टेको टोकाईबाट कतिपय रोगहरु लाग्ने गर्दछ भने केही रोग सर्ने समेत हुन्छ । त्यसैले यसको टोकाइबाट बच्नु पर्छ । तर कसरी ?
१. पानी जम्न नदिने
लामखुट्टे पानि जम्ने भाडा, खाल्डा, नाला वा धेरै लामो समयदेखि पानी राखिएको स्थानमा बस्ने, अण्डा पार्ने र बच्चा हुर्काउनेसम्म गर्दछ । त्यसैले यसलाई निर्मूल पार्न लामखुट्टे हुर्कन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसकालागि ती स्थानमा पानी जम्न नदिने ।
लामखुट्टेले फोहोरमा आश्रय लिन्छ । साथै प्रदूषित स्थानमा यो चाडै फैलन्छ । त्यसैले लामखुट्टेबाट बच्न घर आसपासको सरसफाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ ।
३. झ्याल ढोकामा जाली
गर्मी मौसममा कोठामा हावा आउजाउ गर्न झ्याल ढोका खोलिन्छ । तर यसरी झ्याल ढोका खुल्ला छाड्दा लामखुट्टे कोठामा पस्ने गर्दछ । त्यसैले झ्याल ढोकामा जाली लगाउनु पर्दछ ।
४. झुलको प्रयोग
लामखु्ट्टेको टोकाईबाट बच्न सबैले प्रयोग गर्ने विधि भनेको धूपको प्रयोग हो । अझ अहिले बजारमा विद्युतिय धूप झ्यापझ्याप्ती पाइन्छ । तर, यस्ता धूपको रातभर प्रयोग गर्दा श्वास प्रश्वासमा असर पर्ने गर्दछ । अझ दमको रोगीहरुका लागि त यो झनै हानिकारक छ । त्यसैले सकेसम्म झुलको प्रयोग गर्नु नै उपयोगी हुन्छ ।
५. वैकल्पिक उपाय
लामखुट्टे भगाउनका लागि केही घरेलु उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । जस्तो कोठामा कपुर जलाएर केही मिनेट सबै झ्याल ढोका बन्द गर्ने । यसो गर्दा घरभित्र पसेको लामखुट्टे मर्छ । घरको झ्याल ढोकामा तुलसीको बोट रोप्नाले पनि लामखुट्टेको प्रकोप कम हुने बताइन्छ ।